I-IATA: Ukuqinisekiswa kweenyanga ezili-12 zeSatifikethi se-EU COVID siyakukhusela ukubuyiswa kwakhona kokhenketho
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba zaseYurophu » I-IATA: Ukuqinisekiswa kweenyanga ezili-12 zeSatifikethi se-EU COVID siyakukhusela ukubuyiswa kwakhona kokhenketho
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ukucalula phakathi kwezitofu zokugonya ezivunyiweyo yi-WHO yinkcitho yemithombo kunye nomqobo ongeyomfuneko kwinkululeko yabantu yokuhamba.
The Umbutho wamazwe ngamazwe oThutho loMoya (IATA) ucele isilumkiso kwiNgcebiso yeKhomishini yaseYurophu yokuba i-EU Digital COVID Certificate (DCC) kufuneka ihlale isemthethweni ukuya kuthi ga kwiinyanga ezilithoba emva kwethamo logonyo lwesibini, ngaphandle kokuba i-booster jab ilawulwa.
“I-EU DCC yimpumelelo enkulu ekuqhubeni indlela efanayo kwilizwekazi liphela yokulawula ingxaki yezempilo ye-COVID-19 kunye nokuququzelela inkululeko yabantu ukuba bahambe kwakhona. Ixhasa ukuchacha okuethe-ethe kwicandelo lezohambo nokhenketho. Kwaye kubalulekile ukuba naluphi na utshintsho kuyo lube nendlela edibeneyo eqaphela impembelelo yemigaqo-nkqubo ehlukeneyo ngamazwe angamalungu kwaye ikhuthaze ukuhambelana ngakumbi iYurophu", utshilo uRafael Schvartzman, IATA's Regional Vice President for Europe.
Umba obalulekileyo kukusebenza kwesitofu sokugonya kunye nemfuneko yokudubula kwe-booster. Njengoko ugonyo olubonelelwa ngogonyo luphela, i-booster jabs iya ibonelelwa ngokwandayo ukuze yandise kwaye yomeleze impendulo yabantu yokuzikhusela. Nangona kunjalo, ukuba i-booster shots igunyazisiwe ukugcina ukunyaniseka kwe-DCC, kubalulekile ukuba amazwe angqinelanise indlela yawo kubude bexesha elivunyelweyo phakathi kwendawo yokugonywa ngokupheleleyo kunye nokulawula idosi eyongezelelweyo. Iinyanga ezilithoba ezicetywe yiKomishoni zinokungonelanga. Kungangcono ukulibazisa le mfuno de onke amazwe abonelele nge-booster jabs kubo bonke abemi, kunye nokuqinisekiswa kweenyanga ezilishumi elinesibini ukunika ixesha elingakumbi lokuba abantu bafikelele kwidosi ye-booster, kuthathelwa ingqalelo iindlela ezahlukeneyo zogonyo lwesizwe ezithathwayo.
“Isiphakamiso sokulawula imida ekunyanisekeni kwe-DCC sidala iingxaki ezininzi ezinokubakho. Abantu abafumene isitofu sokugonya ngaphambi kuka-Matshi, kubandakanywa nabasebenzi bezempilo abaninzi, kuya kufuneka babe sele befikelele kwi-booster nge-11 kaJanuwari okanye bangakwazi ukuhamba. Intando EU amazwe ayavumelana ngexesha elimiselweyo? Imfuno iya kudityaniswa njani namazwe amaninzi athe aphuhlisa ukupasa kwe-COVID amkelwa ngokuphindaphindiweyo yi-EU? Ngaphezu koko, i I-World Health Organization (WHO) uthe i-booster shots kufuneka ibekwe phambili kumaqela asemngciphekweni angakhange abe nedosi yokuqala, singasathethi ke nge-booster. Kwihlabathi liphela, inkqubo yesitofu sokugonya isenendlela ende ekufuneka ihambe kumazwe amaninzi asaphuhlayo kwaye kufuneka kugxilwe ekuqinisekiseni ukulingana kwesitofu sokugonya. Ngenxa yokuba uninzi lwabahambi ngeenqwelomoya abekho kwelona qela lisemngciphekweni, ukuvumela ixesha leenyanga ezilishumi elinambini ngaphambi kokuba kufuneke i-booster iya kuba yindlela enokusebenziseka ngakumbi kubahambi kunye nendlela efanelekileyo yokulingana kugonyo, utshilo u-Schvartzman.
Ukuqatshelwa kwesitofu sokugonya
Enye into exhalabisayo sisindululo seKomishoni sokuba abahambi bagonywe ngogonye-EU Isitofu sokugonya esivunyiweyo kufuneka sibonise uvavanyo lwe-PCR olungalunganga lwaphambi kokuhamba. Oku kuyakutyhafisa ukuhamba kwiindawo ezininzi zehlabathi apho amazinga osulelo ephantsi, kodwa abantu baye bagonywa WHO-izitofu ezivunyiweyo ezingekafumani mvume yolawulo kwi-EU.
“Oorhulumente kufuneka babeke phambili imigaqo-nkqubo elula, eqikelelwayo nesebenzayo ukuze kuqinisekiswe ukuba abakhweli bafumana ukuzithemba kwakhona ekuhambeni kunye nokuzithemba kweenqwelo moya zokuvula iindlela kwakhona. Iziko laseYurophu loLawulo lweSifo licacile kwingxelo yalo yomngcipheko yamva nje yokuba izithintelo zokuhamba azinakwenzeka ukuba zibe nempembelelo enkulu kwixesha okanye ubunzulu bendyikityha zengingqi. Siyayibulela into yokuba abasemagunyeni kufuneka bahlale bephaphile, kodwa ukucalula izitofu zokugonya ezivunyiweyo yi-WHO yinkcitho yemithombo kunye nomqobo ongeyomfuneko kwinkululeko yabantu yokuhamba,” utshilo uSchvartzman.